YAANU NAHAY » AquaLuz
Waxaan u hibeynayaa AquaLuz macalimiinta aan Saa'uul Daa'uud Raye iyo Miguel Angel oo waxay iga caawiyaan qaabaynta iyo wadaagaan aragti lagu bogsiiyey, version of this u kaliyeeli planetary. Markaasuu, Dabcan, Waxaan u hibeynayaa AquaLuz hooyada – Lakshmi, Country, Ixmel, Pachamama, Hooyo Mary, Ishtar, dhamaan hooyooyinka iyo kuwa kale oo dhan.
Fukushima ayaa masduulaagii in ii toosisay u khatar iyo cudur qaadeen biyaha aynu dhulka. Dhamaan biyaha ku on Earth ku xiran yihiin oo ay biyaha deegaankeena ayuu bogsiinayay:, waxaan bogsiiyo dhan biyaha ku, oo ay ku jiraan badweynta Pacific ee.
AquaLuz waxaa xaflad caalami ah wada na keeno oo leh ujeeddo, gariirka, Salaadda, iyo jidh iftiinka – kiristaalo. Hadda waxaad bilaabi kartaa si firfircooni kiristaalo aad la gaar Salaadda, heesayay, niyad si marka aan si wadajir ah u dhig biyaha dhulka, ay qaban doonaan yahay jacaylka iyo awoodaha ayuu bogsiinayay:. Waxaan iyaga ka dhigi doonaa biyaha on Fall ku maailnta Eve oo u heesa 'Om Mani Padme Hum’ – gelinayn tamarta qalbigeennu ee biyaha ku shubaa,, huwinayaa galay ayaa hadhkooda ku.